KaOS 2020.07 inosvika neKernel 5.7.8, KDE Plasma 5.19.3 uye nezvimwe | Linux Vakapindwa muropa
Kutanga kwe iyo nyowani vhezheni ye KaOS 2020.07 mariri yakawanda yekugadzirisa yakaitwa'
Mune iyi vhezheni itsva zvinyorwa zveshanduro nyowani zvakasimbiswa Del Kernel, iyo KDE desktop nharaunda, KDE kunyorera, pamwe ne zvakasiyana siyana zvekugovera.
Kune avo vasingazive KaOS vanofanira kuziva kuti izvi kugovera kwakagadzirwa naAnke "Demm" Boersma, uyo pakutanga akashanda paChrakra Linux. KaOS kusiyana nedzimwe distros yakagadzirwa kubva cerkana. Sekureva kwevagadziri vayo, chinangwa chayo chinonyanya kusiyaniswa. Izvi zvinosanganisira kusarudzika kusarudzwa kwemashandisirwo kana kutsigirwa kwakasarudzika kweanogadzira 64-bit.
KaOS inozivikanwa nekuve kugoverwa kweLinux independiente , que inosanganisira yazvino vhezheni yeKDE Plasma desktop nharaunda uye mamwe mapurogiramu epurogiramu anozivikanwa anoshandisa Qt toolkit.
Iyo pakutanga yaive yakavakirwa paArch LinuxAsi kubva muna Kubvumbi 2013, vagadziri vakatanga kugadzira avo mapakeji, ayo ave kuwanikwa kubva kuKaOS imba yekuchengetera.
Iko kurongedza kunotarisirwa nechikwata pachacho, chete kune dzakagadzikana shanduro, uye inodzorwa nePacman simaki. KaOS inoshandisa Rolling Relase kutsikisa modhi yekuvandudza uye inongowanikwa chete kune makumi matanhatu nemasere masisitimu.
1 Chii chitsva muKaOS 2020.07?
1.1 Dhawunirodha KaOS 2020.07
Chii chitsva muKaOS 2020.07?
Mukuzivisa kweshanduro nyowani zvinoratidzira "kuiswa kweyakaenderana dhizaini" uye nzvimbo yemusoro yemapiritsi e systray, pamwe nezviziviso, iyo Yakagadziridzwa kutariswa kweiyo media player applet mune systray.
Izvi ndezvekutenda mukuitwa kwenzvimbo yedesktop KDE Plasma 5.19.3, KDE kunyorera 20.04.3, Qt 5.15.0, Tafura 20.1.3, pakati pezvimwe zvinhu.
Iyo yekutanga vhezheni inosanganisira Photoflare mufananidzo mupepeti, VVave mimhanzi inoridza, uye iyo Kdiff3 utility.
Iyo dhizaini dhizaini yakagadziridzwaUye zvakare, rutsigiro rwe systemd-bootloader-based boot process madingindira akawedzerwa.
Uyezve mune yekumisikidza Squids, pazvinogoneka, QML-based module anoshandiswa, kusanganisa module nyowani yeQML yekumisikidza keyboard keyboard, uye module yekumisikidza localization iri kuvandudzwa.
Nguva kwechikamu chekuvandudzwa kune hwaro hwekugovera ukun inosanganisira Cfitiso 3.480, Poppler 0.90.1, Pciutils 3.7.0, Git 2.27.0, Libacp 2.39, Pam 1.4.0, Glib2 2.64.3, Kunyengedza 2.2.6, NetworkManager 1.26.0, Perl 5.30.3.
Pamwoyo pesisitimu tinogona kuwana iyo Linux Kernel 5.7.8, pamusoro pekuti Ksplash yakareruka nemifananidzo mishoma inofamba, iyo SDDM theme ine musiyano uri nani.
Dzimwe shanduko dzakakosha dzakataurwa mukuzivisa kwekutanga uku ndeyekuti iyi nyowani ISO inoshandisa CRC uye finobt yakagadziriswa in the XFS faira system nekutadza.
Finalmente kune avo vanofarira kuziva zvakawanda nezvazvo nezve kuvhurwa uku, unogona kutarisa ruzivo mukati mechiziviso chepamutemo Mune inotevera chinongedzo.
Dhawunirodha KaOS 2020.07
Chekupedzisira, kana iwe uchinge usina KaOS yakaiswa pakombuta yako uye iwe uchida kurodha pasi nekumisikidza kugoverwa kweLinux kwakanangidzirwa pane iyo KDE desktop nharaunda pakombuta yako kana iwe uchida kuyedza pasi pemuchina chaiwo.
Iwe unongofanirwa kuenda kune yepamutemo webhusaiti yekugovera uye muchikamu chayo chekuburitsa unogona kuwana iyo system mufananidzo. Iyo yekubatanidza ndeiyi.
Iwe unogona kusevha iyo yakadhirowewa mufananidzo kune USB chishandiso nerubatsiro rweiyo Etcher application.
Si watove mushandisi weKaOSIwe unofanirwa kunge wakagamuchira izvi zvakagadziriswa mumazuva mashoma apfuura. Asi kana iwe usingazive kana iwe uchitova nawo akaiswa, ingovhura terminal uye unomhanya inotevera mirairo mairi:
Nezvo, iwe unofanirwa chete kugamuchira izvo zviripo kana zviripo uye ini ndinokurudzira kutangazve komputa yako.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » KaOS 2020.07 inosvika neKernel 5.7.8, KDE Plasma 5.19.3 uye nezvimwe